eNasha.com - व्याकुलकै गीत छिनियो
व्याकुलकै गीत छिनियो
किराँत राई यायोक्खाले ६ गते बिहीबार व्याकुल माइलालाई सम्मानित गरिरहँदा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा भने उनकै बारेमा लामो बैठक चलिरहेको थियो । त्यो बैठक चाहिँ उनले लेखेको गीतलाई राष्ट्रगानका रुपमा अन्तिम निर्णय लागि बसेको थियो ।
किराँत राई यायोक्खा बेलायतले सम्मान गरिसकेपछि जब उनी फर्कँदै थिए, उनको मोबाइल लगातार बज्यो । उनी एक छिन् त छक्क पनि परे, पुरानै समाचारको बधाई किन आइरहेको छ भनेर ! उनलाई फोन गर्नेहरुले उनको गीत राष्ट्रगानको रुपमा चयन भएकोमा बधाई दिइरहेका थिए । पछि राति घर पुगेर कान्तिपुर टीभीमा समाचार हेर्छन् त आफ्नो गीतलाई मन्त्री पृथ्वी सुब्बाले राष्ट्रगानका रुपमा स्वीकृत गरेको खबर वाचन गरिरहेको छ ।
"यसपछि लामो समयसम्म धुकचुक भएको मेरो मन शान्त भयो", इनशाडटकमसँग प्रतिक्रिया दिँदै व्याकुल माइलाले भने- "सरकारले बल्ल निर्णय गरेपछि अब म ढुक्क छु ।" त्यसो त उनलाई ६ महिनाअघि राष्ट्रगान सुझाव आयोगले आफ्नो गीतलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर निर्णय गरेपछि रातभर निन्द्रा लागेको थिएन । उनलाई बिहीबार चाहिँ त्यस्तो भएन ।
निकै लामो समयदेखि यो गीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित गराउन पर्खिरहेको थियो ।
यता माइलाको गीतलाई सङ्गीत भर्ने जिम्मेवारी पाएका दुइ सङ्गीतकारमध्ये न्हृयू वज्राचार्य यो निर्णयपछि अब आफ्नो कामको 'स्पीड' बढ्ने इनशाडटकमसँगको छोटो कुराकानीमा बताएका छन् । "मैले एउटा रफ म्युजिक चाहिँ सोचिसकेको छु, तर यसमाथि 'रि-वर्क' चाहिँ गर्नैपर्ने भएको छ", सङ्गीतकार वज्राचार्यले बताए ।
त्यसो त शुरुमा गीत छनोट भएपछि पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट आफूलाई यो गीतको सङ्गीत भर्न मौखिक प्रस्ताव आएको तर त्यसपछि भने कुनै लिखित जानकारी नआएको समेत वज्राचार्यले इनशाडटकमसँग खुलासा गरेका छन् । "शायद यसमाथि अनेक तर्कहरु भएका कारण मन्त्रालय पनि दुविधामा परेकाले जानकारी नआएको हुनसक्छ", कारण बताउँदै वज्राचार्यले भने- "अब चाहिँ आधिकारिक पत्र आउला कि !"
त्यसो त मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ र न्हृयू वज्राचार्यलाई यसमाथि सङ्गीत गराउने निर्णय गरेकोमा अन्य सङ्गीतकारहरुले आलोचना गरेका छन् । केहीले त यसका सर्जक व्याकुल माइलालाई समेत गुनासो गर्न भ्याइसकेका छन् । बिना प्रतिस्पर्धा सङ्गीत गर्न दिएको कुरामा उनीहरुको असहमति रहेको गीतकार माइलाको धारणा थियो । "तर यसमा मेरो केही हात छैन, मैले त गीत लेखेँ, मेरो काम सकियो । बाँकी काम मन्त्रालय र सम्बन्धित व्यक्तिको हो", गीतकार माइलाको धारणा थियो ।
यता प्रख्यात सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले राष्ट्रगानमाथिको सङ्गीत कति लेखिसिध्याए भन्ने विषयमा चाहिँ थाहा हुन सकेको छैन । तर गुरुङ र वज्राचार्य ज्यादै सक्षम सङ्गीतकार भएकाले आफ्नो गीतमाथि न्याय हुने गीतकार माइलाको प्रतिक्रिया छ ।
लुकेका कुरा सङ्गीतकार रिलिज ट्रयाक बाहिर समुद्रपार नेपाली तारा क्या बात ! कीर्तिमान तातोपीरो अवार्ड उपलब्धि भिडन्त विचार पेज थ्री गायक गायिका प्रेम र विवाह रुचि कन्सर्ट हल्ला